FOLLOWUP : ईपीसेन्टर बुंगमति : कुरुवा अस्पतालमा, हरिसिद्धिमा कोलाहल ! | OnlinePatrika.com - News of Nepal, latest and breaking news from Nepal
FOLLOWUP : ईपीसेन्टर बुंगमति : कुरुवा अस्पतालमा, हरिसिद्धिमा कोलाहल !
‘यहाँ देखिएका मान्छेहरु अस्पतालको सुरक्षा निगरानीमा छन् ।’ वडा २८ का वडाध्यक्ष राजेश महर्जनले अनलाइन पत्रिकालाई भने, ‘उनको परिवार यहाँ आएकै छैनन् । यो हल्ला हो ।’
बुंगमतिका स्थानीय बितेको तीनदिन भयो । सरकारले ती व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमित भनेर पुष्टि गरिसकेको छ । ग्वार्काेको किष्ट अस्पतालमा उनको निधन भएको थियो । संक्रमितको शव लान शववाहन र एम्बुलेन्स पाइएको थिएन । बल्ल शवलाई विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरियो ।
यसैबीच, ललितपुरका केही माननीयहरु समेत दुःखदायी घटना भन्दै बुंगमति पुगेर समवेदना प्रकट गर्न पुगेका छन् । र, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलगायतको टोलीसमेत बुंगमति पुगेका छन् ।
यो घटनाक्रमको सिलसिला चलिरहँदा बिहिबार साँझ ‘हरिसिद्धिमा कोरोना संक्रमित पस्यो’ भनेर ठूलो हल्ला भयो । स्थानीयहरुमा चिन्ता र डर देखियो । अनलाइन पत्रिकासँग सम्पर्कमा आएका एक स्थानीयले ‘यो सत्य भएको’ दावी गरे । अनलाइन पत्रिकाले यो घटनाको खोजी गर्दा ‘कोरोना संक्रमित भेटिएको’ समाचारसँग बुंगमतिको घटना जोडिएको प्रष्ट भयो ।
बुंगमतिका ५६ वर्षीय व्यक्ति (जो निधन भए) का ज्वाईँ रहेछन् हरिसिद्धि बस्ने ती व्यक्ति । संक्रमितसँग उनको नियमित सम्पर्क देखिएको हुनाले हरिसिद्धिमा चिन्ता बढेको रहेछ । संक्रमित भनिएका (जो ससुरा) हुन्, उनी उनको हेरचाहमा खटिएका थिए । ‘यहाँ देखिएका मान्छेहरु अस्पतालको सुरक्षा निगरानीमा छन् ।’ वडा २८ का वडाध्यक्ष राजेश महर्जनले अनलाइन पत्रिकालाई भने, ‘उनको परिवार यहाँ आएकै छैनन् । यो हल्ला हो ।’
यसैगरि, ‘कोरोना संक्रमित’ भनेर पुष्टि गरे लगत्तै बुगमतिमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । महानगरिय प्रहरीले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका र पाइएकाहरुको निगरानी बढाएको छ । सरकारी टोलीले ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ (संक्रमितसँगको सम्पर्कमा रहेकाहरुको खोजी) प्रारम्भ गरेको छ ।
EXCLUSIVE BREAKING : ललितपुरमा एकजनाको निधन । ललितपुरका स्वास्थ्य प्रमुख भन्छन्, ‘पीसीआर पोजेटिभ छ’
FOLLOWUP : पहिला निधन, पछि रिपोर्ट पोजेटिभ । निधनपछि ललितपुरमा सतर्कताको नालीबेली !
FOLLOWUP : विद्युतीय शवदाह गृहमा बिदाई हुँदै गर्दा बुंगमतिमा कन्ट्याक्ट्र ट्रेसिङ प्रारम्भ !
Previous articleराष्ट्रसेवकमाथि कोरोना संक्रमण : महोत्तरीका जिल्ला समन्वय अधिकारी पनि संक्रमित !
Next articleभ्रामक हो समाचार । धनुषाका सिडिओ भन्छन्, ‘राष्ट्रसेवामा तल्लीन छु’
सातदोबाटोस्थित एन्फाभित्र क्वारेन्टिनमा बसेका चारजनामा कोरोना पुष्टि